Panoramic Smart Apartment Studio Suite (1305) - I-Airbnb
Panoramic Smart Apartment Studio Suite (1305)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu玲
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike u玲 iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ihotele ibekwe kumgangatho we-13 we-Shuxiangjiayuan Community, i-Shanghai Road, iZiko leSixeko saseShiyan. Ikufuphi ne-Hubei Medical College, i-Hanjiang Normal University, isibhedlele sase-Taihe, kwaye kukho iiprojekthi ezininzi zorhwebo, zokudlela kunye nezolonwabo ezikufutshane. drive imizuzu-5 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye isikhululo sebhasi, yaye drive yemizuzu engama-30 uyakwazi ukufikelela moya, Wudang Intaba Ingingqi yeMbonakalo yelizwe, indawo geographical ungcono, kwanokuthuthwa kulungile.
Igumbi lonke ligumbi lokulala elinye, igumbi lokuhlala elinye kunye negumbi lokuhlambela elinye elinendawo epheleleyo yeemitha ezizikwemitha ezingama-55. Linobunewunewu kancinci kwaye lilula kwisitayile sokuhombisa. Uyilo lwendawo lulungile kwaye luyasebenza. indawo elizimeleyo yangasese, obanzi iifestile emgangathweni-to-isilingi, iiyure ezingama-24 amanzi ashushu, kwaye central umoya-moya.. Igumbi lixhotyiswe ngendlu yonke elumkileyo, amacango atshixayo, iikhethini, izibane, iTV, njl. njl , uwuhlangule ngokupheleleyo izandla zakho. Ibhedi epholileyo kunye nethambileyo inokukunika indawo yokulala enoxolo; izixhobo ezincinci ezifana neefriji, oomatshini bokuhlamba, izicoci zamanzi, izipheki zokuvalela, njl.njl. zizisa lula kubomi bakho bemihla ngemihla.
Ihotele ixhotyiswe ngendawo yokupaka yasimahla, exhotyiswe ngokhuseleko lweeyure ezingama-24, ukunika uluhlu olupheleleyo lokhuseleko kubomi bakho kunye nokhuseleko lwesithuthi.
Igumbi linendawo yokuhlangana ezimeleyo, exhotyiswe ngemithombo yokusela ngokuthe ngqo, iiseti zeti, njl.;
I-balcony ixhotyiswe ngeqonga lokujonga, ngoko unako ukunandipha ixesha lokuphumla kwindawo yedolophu enomsindo;
Indawo yokuhlambela eneendawo ezintathu ezizimeleyo, indawo yokuhlambela esondeleleneyo, khulula ukudinwa ngexesha lohambo kwaye uzivumele uhambe
Igumbi libekwe kumgangatho we-13 weGreen Tree Inn, iSakhiwo se-4, i-Shuxiang Jiayuan Community, i-Shanghai Road, kufuphi ne-Hubei Medical College kunye ne-Hanjiang Normal University. Kukho amashishini amaninzi kwindawo ejikelezileyo, kwaye zininzi iiprojekthi zokutya nezolonwabo. Kukho iLi Molai Coffee kumgangatho we-13, iShoukang Life Supermarket ezantsi, iBhanki yaseTshayina, iqula lokuqubha langaphakathi, kunye neUniversal International Studios zifikeleleka lula.Kukwakho nebala lokudlala elikhulu elisecaleni kwehotele, elinezixhobo ezahlukeneyo zokuzilolonga. yindawo elungileyo yokuphumla.
Ukubonelela ngenkonzo esemgangathweni kwiintsuku ezingama-365 ngonyaka!